I-Color Change Garnet, evela eTanzania / akukho nonyango / ividyo
tags Garnet yeMbala
Umxube we-spessartite kunye ne-pyrope garnet. Le garnet ibonisa ukutshintsha kombala ukusuka kumbala obomvu emini ukuya kwi-pink pink kwi-incandescent light. Utshintsho lombala lukhulu kwaye luphawulekayo, olugqithisileyo lwe-alexandrite ebiza kakhulu.
Ilungu elinqabileyo nelisigxina leqela le-garnet yamagugu. Unqwenela kakhulu ukukwazi ukuguqula umbala ngokuxhomekeke kumthombo wokukhanya ovela kuyo. Ikhono lokwenza umbala utshintsho lidla ngokugqithiseleyo ngephutha ngenxa ye-pleochroism, oko kukukwazi ukubonisa imibala eyahlukileyo kuxhomekeka kwinqanaba lokujonga, ngelixa iinguqu zemibala yenguqu ayixhomekeke kwinqanaba lokujonga. Ukuguqula umbala wegarnet ngokuqhelekileyo ukuxuba umxube we-spessartite kunye ne-pyrope garnet kwaye kwiimeko ezininzi, unokufumana iimpawu ze-grossularite okanye i-garnet ye-almandine.
Ubungakanani bokutshintsha kombala lunokuba lukhulu kakhulu, ngokugqithiseleyo lugqithiseleyo lwe-alexandrite engcono kakhulu. Ininzi yale miqolo iya kubonisa umbala obomdaka obomvu okanye obhedu xa ubonwa phantsi kwemini yokukhanya kwemvelo, kodwa xa ibonwa phantsi kwe-incandescent light, iya kubonakala iphakama kumbhenela ngombala. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokuguquka kombala okunokwenzeka. Ukuze uxabise ngokwenene uluhlu olupheleleyo lwegarnet yenguqu, iimpawu kufuneka zigcinwe phantsi kweemeko ezahlukeneyo zokukhanyisa, kubandakanywa kusasa kusasa, kusasa kwemini, ukukhanya kwe-fluorescent kunye nokukhanya kwe-incandescent okanye ikhandlela.
Njengamagugu amaninzi e-garnet, i-garnet yokuguqulwa kombala ayiyaziwa ukuba iphathwe okanye iphuculwe naliphi na indlela.
uthenge umbala weMbala Utshintsho lweGarnet kwisitolo sethu